Mucaaradka dalka Kenya oo Maraykanka ka dalbaday in Laga Caawiyo dib usoo Celinta Ciidankooda Jooga dalka Soomaaliya | SAHAN ONLINE
Mucaaradka dalka Kenya oo Maraykanka ka dalbaday in Laga Caawiyo dib usoo Celinta Ciidankooda Jooga dalka Soomaaliya
Madaxda Mucaaradka dalka Kenya
Mucaaradka dalka Kenya ayaa dawladda Maraykanka ka dalbaday in Kenya ka taageerto dib usoo celinta Ciidankooda nabad ilaalinta u Jooga gudaha dalka Soomaaliya.
Madaxda Mucaaradka ee Kenya (CORD) Raila Odinga Iyo Guddoomiyihiisa Kololzo Musyoka ayaa kala hadlay Wufuud u dhalatay dalka Maraykanka sidii gacan looga siin lahaa sidii Ciidanka Kenya looga soo saari lahaa dalka Soomaaliya.
Ururka Al-Shabaab ayaa marar badan u jeediyey dowladda Kenya in
Ciidamadeeda ka jooga gudaha dalka Soomaaliya kala baxdo haddii kalena ay
dhibaato kala kulmayaan.
Ururka Al-Shabaab oo ka Jawaabaya diidmada dowladda Kenya ee ka saarida Ciidankeeda gudaha Soomaaliya ayaa weerarkii ugu khasaaraha badnaa ka geystay Jaamacada Gaarisa ayna ku dileen 148-qof oo u badnaa ardeydii Jaamacada.
Madaxda Mucaaradka ayaa u sheegay Xildhibaanadan u dhashay dalka Maraykanka in dawlad iyo Shacaba kala kulmeen Ururka Al-Shabaab arrimo xanuun badan gaar ahaana weerarada dalkooda ka geysanayaan.
Madaxweyne Kuxigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa ka dhawaajiyey in Ciidankooda ku sugan Soomaaliya xiligan aysan kasoo baxayn lana dagaalamayaan kuwa khatarta ku ah Kenya.
”””’Argagaxisadu waxay naga dalbadeen inaan ciidamadeenna kala baxnoSomalia, si ay qayb dhulkeenna ka mid ah u qabsadaan; innagu waxaan usheegaynaa inaanan ciidamadeenna la bixi doonin””””ayuu yiri Ruto.
Isbaheysiga Mucaaradka dalka Kenya ODM iyo Ururka Al-Shabaab ayaa dhawaan dowladda Kenya ka dalbaday dib in looga soo saaro Ciidamada Kenya ee ku sugan dalka Soomaaliya.